မသေလို့ ရေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါလား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မသေလို့ ရေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါလား။
မသေလို့ ရေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါလား။
- Nyein Nyein
Posted by Nyein Nyein on Sep 15, 2012 in Creative Writing, Events/Fundraise, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 41 comments
ရွာထဲမရောက်တာလည်း တော်တော်ကြာပါပြီ။ စိတ်ကတော့ အမြဲရောက်ပါတယ်။ ပို့စ်တွေလည်းတင်ချင်တာ မတင်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အခုတလော အိမ်ကိုလည်းနောက်ကျမှ ပြန်နေရတယ်။ နောက်ကျတော့ ကားတစ်ဆင့်ထဲနဲ့ ရောက်ရမှာကို နှစ်ဆင့်စီးပြီးမှ အိမ်ရောက်ရော………..။ အဲဒီ့လို နှစ်ဆင့်အစီးကောင်းတာ ကံကောင်းလို့ မသေတယ်။ ဖြစ်ပုံအစုံကတော့……………………
အဲဒီ့နေ့က (၈)နာရီခွဲကျော်ကျော်လောက်မှ ရုံးကနေပြန်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ့တော့ စီးနေကျ (၁၅၇) အထူးက မလာတော့ဘူး။ ကံကောင်းရင်တော့ တစ်စီးတစ်လေ လာတတ်ပေမယ့် နောက်ကျနေတော့ သူလာတဲ့အထိလည်း မစောင့်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ အဓိပတိ(အနီ) လေးစီး၊ ကမ္ဘာအေးမှာဆင်း၊ နောက်တစ်ဆင့်ပြန်စီးမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး စီးလိုက်မိပါတယ်။ ကားကတော့ လူသိပ်မပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ အကြောရှည်ပြီး နောက်ဆုံးခုံတန်းရှည်မှာ သွားထိုင်မိတယ်။ အုတ်ကျင်းမှတ်တိုင်လည်းရောက်ကရော ကားကမှတ်တိုင်မှာတောင် မရပ်သေးဘူး။ နောက်ကကားပေါ့…….. (၄၈) အထူးလေ။ အဓိပတိ(အနီ)ကို ၀င်ဆောင့်တယ်။ အရှိန်တော်တော်ပြင်းပြင်းကို ၀င်တိုက်လိုက်တာပါ။
ဘာပြောကောင်းမလဲ။ နောက်မှန်ကြီး ကွဲသွားပြီး မှန်စတွေလာစင်တယ်လေ။ နောက်ဆုံးခုံမှာ ထိုင်တဲ့ (၆)ယောက်မှာ (၃)ရောက်ကတော့ မှန်စတွေထိပြီး နဖူးနဲ့ဂုတ်တွေမှာ သွေးတွေနဲ့ပေါ့။ ဒဏ်ရာရတဲ့ (၃)ယောက်က ငြိမ်းဘေးမှာ ထိုင်တာပါ။ အဲဒီ့နေ့က ငြိမ်းကတော်တော်လေးကို ကံကောင်းတာပါ။ ကျောကုန်းကို နည်းနည်းကြီးတဲ့ မှန်ကွဲတစ်ခု လာရိုက်မိတာပါ။ အပြားလိုက်ရိုက်မိလို့ပေါ့။ မဟုတ်လို့ကတော့ မှန်စိုက်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်မှာ။ အင်္ကျီပေါ်တွေမှာကော၊ ဆံပင်တွေမှာပါ မှန်စတွေချည်းပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ အစ်မတစ်ယောက်နဲ့အတူ ကားငှားပြီးပဲ အိမ်ပြန်လိုက်တော့တယ်။ အိမ်ပြန်တဲ့တစ်လမ်းလုံးလည်း လူက လန့်လည်းလန့်၊ အင်္ကျီမှာလည်း မှန်စတွေနဲ့ဆိုတော့ ဟိုနားကဆူးတူးတူး၊ ဒီနားကဆူးတူးတူးနဲ့ပေါ့။ အဲဒီ့ညကလည်း အိပ်လို့ကို မပျော်ဘူး။ တစ်ညလုံးလန့်လန့်နိုးနေရော…………….
ဖြစ်ပုံကတော့ အဲဒီ့လိုပါ။ စိတ်လည်းငြိမ်သွားပြီး လန့်တာနည်းနည်း ပျောက်သွားတဲ့ အချိန်ကျမှ အဲဒီ့အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့………. လွတ်တယ်ထင်ပြီး အရှိန်မလျှော့ဘဲ အသားကုန်မောင်းတဲ့ကားတွေရယ်၊ မှတ်တိုင်မှာ စနစ်တကျ သေချာမရပ်ကြတာရယ် နှစ်ခုလုံးကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ စမှားတာကတော့ (၄၈) အထူးကမှားတာလို့ထင်တယ်။ ငြိမ်းတို့စီးလာတဲ့ အဓိပတိ(အနီ)က မှတ်တိုင်မှာ ရပ်မလို့ပါ။ (အဲဒီ့မှတ်တိုင်မှာ ကားတစ်စီးလည်း ရပ်ထားတာရှိပါသေးတယ်။) မှတ်တိုင်မှာ သေချာမရပ်ရသေးခင် နောက်ကနေ ၀င်တိုက်တာပါ။ သေချာမရပ်သေးခင် ၀င်အတိုက်ခံရတာဆိုတော့ အဓိပတိ(အနီ)က မှတ်တိုင်မှာ သေချာရပ်မှာလား၊ မရပ်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့သေချာ မသိလိုက်ဘူးပေါ့လေ။
လိုင်းကားတွေတင်မကပါဘူး။ taxi တွေဆိုလည်း အဲဒီ့လိုပါပဲ။ ငှားတဲ့လူရှိလည်း ဘေးကပ်ရပ်ပြီး ဈေးမပြောဘူး။ လမ်းအလယ်မှာ ကားရပ်ပြီး ပြောတယ်။ နောက်ရှိသေးတယ်။ မနေ့ညတုန်းက အပြန်မှာ တွေ့လိုက်တာ။ taxi တစ်စီးပေါ့။ လမ်းအလယ်မှာ ရပ်ပြီး စကာလှမ်းပြောနေတာလေ။ နောက်မှာ ကားတွေက ပိတ်နေပြီ။ ကိုယ့်အသိမိတ်ဆွေတွေ့လည်း ကားတော့ လမ်းဘေးရပ်ပြီး ပြောဆိုနှုတ်ဆက်လို့ရတာကို။ ခဏပါပဲဆိုပြီး အလွယ်လုပ်ကြတော့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကြတာပါ။
“ခဏလေးပါပဲ” ၊ “သိပ်မကြာပါဘူး” ၊ “ငါ့တစ်ယောက်ထဲနဲ့တော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး” ဆိုပြီး ပြီးစလွယ်လုပ်မိနေတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီးပါ။ ခဏလေး၊ သိပ်မကြာပါဘူးဆိုတာကလည်း အချိန်တွေ အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်သလို၊ “ငါ့တစ်ယောက်ထဲနဲ့တော့” ဆိုတာကလည်း လူတစ်ယောက်ချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီကသာ “ငါ့တစ်ယောက်ထဲနဲ့တော့” ဆိုပြီး ဖြစ်နေရင် အကုန်လုံးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ကိစ္စကိုမှ ပြီးစလွယ်မလုပ်မိတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာက ကိုယ့်သမိုင်းပဲဆိုတော့ကာ………… ရွာသူားအပေါင်း သမိုင်းတွေလှနိုင်ကြပါစေ…………………..
ရွာသူားအပေါင်း ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာပြီး ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ တစ်ထပ်တည်း ကျနိုင်ကြပါစေ………………………………
About Nyein Nyein
Nyein Nyein has written5post in this Website..
View all posts by Nyein Nyein →
အဲဒါမျိုးတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ကျွန်တော် တို့ စွတ်အော်နေတာပါ ။
ကံကောင်းလို့ ပေါ့ ..
အဲ့ဒီ့ လိုင်းတွေကို တရားစွဲတဲ့ သူတွေ ပေါ်စေချင်ပါတယ် ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုထူးဆန်းရေ……….. အဲ့ဒီ့လို စွတ်အော်နေတာတောင် ဖြစ်တာကတော့ ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြောတာကတော့ ပြောနေမှ ဖြစ်မှာဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ကြုံလိုက်ရတာလေးကို ရေးလိုက်တာပါ။ ဒီတစ်ခါ ၀င်တိုက်တာကတော့ (၄၈) အထူးဆိုပေမယ့် အဓိပတိ(အနီ)က ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့အထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးပဲလို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့လို လိုင်းတွေကို တရားစွဲဖို့ဆိုတာကလည်း အားလုံးကတစ်ညီတစ်ညာတည်းလုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တနေ့ တနေ့ .. ဒီလို တွေဖြစ်နေတာ .. တစ်ခု ထဲ မက ပါကြောင်း
ကိုလုရေ……… တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာ တကယ်ကို တစ်ခုမကပါဘူး။ အများကြီးပါ။ ကိုယ်ကြုံတွေ့သလို ကြုံတွေ့ရသူတွေ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ ဒါတောင် ငြိမ်းက ဘာမှမထိခိုက်လိုက်ပါဘူး။ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့လူတွေအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ကားသမားတွေတော့ သူတို့ကို taxi တစ်စီးနဲ့ ဆေးခန်းကို ခေါ်သွားပေးတာတော့ တွေ့လိုက်ပါတယ်။
နို့မဟုတ်ရင် ကျုပ်အသည်း ဗျန်းဗျန်း ကွဲရမှာ …
ကားတွေ စည်းကမ်း မရှိတာ ..
ကားကြပ်တာတွေကတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့ …
ဒီပြဿနာတွေကို အမြန်ဆုံး ပြေလည်သွားအောင်
ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေလို့ပဲ ကျုပ်ကတော့ မျှော်လင့်မိပါတယ် …
ကိုအံစာတုံးမျှော်လင့်သလိုပဲ ဒီပြဿနာတွေ အမြန်ဆုံး ပြေလည်သွားအောင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ငြိမ်းလည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဟိုတလောကတောင် အခြားလိုင်းတွေတော့ မသိဘူး။ (၁၅၇) အထူးတွေကိုတော့ လူပိုမတင်ရဘူး။ ထိုင်ခုံပြည့်ပဲ လူတင်ရမယ်ဆိုပြီး ဖြစ်သွားသေးတယ်။ ကားကြပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြေလည်နိုင်ပြီထင်တာ။ အခုတော့လည်း နဂိုအတိုင်းပါပဲ။ လူပိုကတော့ တင်မြဲအတိုင်းတင်မြဲ၊ ကားကလည်း ကြပ်မြဲပါပဲ။
ဘ၀ဇာတ်ဆရာရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းထဲမှာ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမဟုတ်သေးလို့ပေါ့။
ရန်ကုန်မှာ ကားအမျိုးမျိုးစီးပြီး အလုပ်အသွားအပြန်လုပ်ရတာ
အလုပ်သိမ်း အိမ်ပြန်ရောက်မှ သက်ပြင်းချနိုင်တာပါ။
တကယ်ကို ကံကောင်းလို့ပါ ကိုချိုကြီးရေ… ကိုချိုကြီးပြောသလိုပဲ ဇာတ်သိမ်းပိုင်း မရောက်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ ကားစီးတော့လည်း ဒုက္ခတစ်မျိုး၊ လမ်းလျှောက်တော့လည်း ဒုက္ခတစ်မျိုးပါပဲ။ ဘယ်လောက်စိတ်မောတယ်ဆိုတာတော့ အိမ်ရောက်ရင် လုံးဝကိုဘာမှ မလုပ်ချင်လောက်အောင်ပါ။ အဲဒီ့နေ့ကတော့ ထမင်းတောင်မစားနိုင်ပါဘူး။ ရေချိုးပြီးတာနဲ့ တန်းလှဲရတာပဲ။
အောင်မငှီး … တော်သေးတာပေါ့ ငြိမ်းငြိမ်းရယ်
ညီမလေး ကံကောင်းပေလို့ပဲ …. ၊ မှန်စစင်လျှင် အနည်းဆုံးတော့ …. အနာတရဖြစ်တာ့မှာပဲ … မတော်လို့ မျက်စိထဲစင်မယ်ဆို …. ရှင်လျှက်နဲ့သေရတဲ့ ဘ၀ … မတွေးရဲစရာပဲ
ညဘက်ဆို ကား သမားတွေ သောက်ပြီး မောင်းကြပါတယ် ။ နဂိုကတည်းကမှ စည်းကမ်း မရှိတာ သောက်ပြီးမောင်းတော့ ..ပြိုင်ကားမောင်းနေလို့စိတ်ဝင်ချင်ဝင်သွားမှာပေါ့ …. ။ နေ့ခင်းဘက် ဂွင်ဖန်ပြီး လိုက်ဖမ်းနေမယ့်အစား.. .နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်းခွဲ ပြီး … လိုအပ်သလို စစ်ဆေးရေးတွေ လုပ်ပေးနိုင်လျှင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ …… ။ ပြောမယ့်သာပြောတာ.. ဟိုကားပေါ်က ပစ်ချတာ လိုက်ကောက် .. ဒီကားပေါ်က ပစ်ချတာ လိုက်ကောက်နဲ့ ဆိုတော့လေ … ဒင်းတို့လည်း ပင်ပန်းရှာပါတယ် … ခွိခွိ
ကျုပ် ပီကယ် တစ်ယောက်ပါ …
အဲ့ဒီလို လိုက်ကောက်နိုင်မှ အိမ်အပြန် မယားက ကြည်မှာမို့
အပင်ပန်းခံပြီး လိုက်ကောက်နေရဒါဘာ …
ရဲ ဘွ လေးတော့ သနားကြပါ ၊။
ကျုပ်ရဲမဟုတ်ဘူးနော် ။ မငြိမ်းငြိမ်းရေ ကျုပ်လဲ ဒီကောင်တွေကို အမြင်ကပ်လွန်းလို့ 
ဟုတ်တယ် မမအိတုန်ရေ…….. ငြိမ်းလည်း အဲလိုဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ဟိုလိုသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုပြီး ပြန်ပြန်တွေးမိတိုင်း လန့်ပြီး နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးခုံကို ဝေးဝေးရှောင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ငြိမ်းလေးရယ် ၊ ငြိမ်းလေးအဖြစ်ဖတ်ရပြီး မောင်ပေ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ရသကွဲ့ 
ငြိမ်းလေးရေ ဒီနေ့ ကစပြီး အရင်ကထက် ပို ဘုရားကို ဝတ်ပြုပါကွယ်
မြန်မာနိုင်ငံက ဘက်စကားလိုင်းတွေကတော့ ၊ နောင် ၂နှစ်လောက်အထိ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမယ်လို့ မထင်မိဘူးကွဲ့ ။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့် ကံစောင့် ဘုရားတရား မပါတယ်ကွယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုပေ………. မဟုတ်တောင် ကိုပေပြောသလိုပဲ အရင်ကထက်ပိုပြီး ဘုရား၊တရား၊သံဃာကို ပိုပြီး အာရုံပြုဖို့၊ ပိုပြီး အားထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ အရင်ကလည်း ကားစီးတိုင်း ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားနေကြပါပဲ။ အခု ပိုလုပ်ရတော့မယ်။
ငြိမ်းရေ ခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ် …
ကံကောင်းလို့ပေါ့ ..လိုင်းကားစီးနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ဘ၀လည်း မလွယ်ပါဘူးနော် …
အမကတော့ လိုင်းကားစီးရင် ပါရမီ/ အဓိပတိတော့ ရှောင်တယ် …
မောင်းချင်သလိုမောင်းး ရပ်ချင်သလိုရပ်နဲ့ စည်းကမ်းကိုမဲ့ကြတယ် …
ဖြစ်လိုက်ရင် မမေးနဲ့ အဓိပတိ ပါရမီ ဆိုတာချည်းပဲ တွေ့တွေ့နေရတော့ …
ခုမှပဲ တွေ့ရဆို တကယ်ကို ရွာနဲ့ အလှမ်းဝေးနေတာ ကြာပေါ့ မဂျူလိုင်ရေ….. အလုပ်ဝင်တာမကြာသေးတော့ မသိသေးတာတွေကို လိုက်သင်နေရတာနဲ့ ရွာကို မရောက်တာပါ။ အခုတော့ မအားလည်း ပြောချင်လွန်းလို့ ရေးလိုက်တာ။
မဂျူလိုင်ပြောသလိုပါပဲ။ တကယ်ကို လိုင်းကားစီးရတဲ့ ဘ၀က မသက်သာပါဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ မစီးပေမယ့် နောက်ကျတဲ့နေ့တွေဆို တစ်ဆင့်ထဲနဲ့ရောက်တဲ့ကားတွေက မလာတော့ဘူးလေ။ အဲဒီ့တော့ အိမ်ကိုမြန်မြန်ရောက်ချင်တော့လည်း လာတဲ့ကားစီးရတာပေါ့။ အခုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး မစီးလို့ရသရွေ့တော့ မစီးဘူးလို့ စဉ်းစားထားတယ်။
တော်သေးတယ် နော် ထိုင်နေတာ ချင်း အတူတူ စာရေးသူ က ထိခိုက်မှု မရှိတာ။
ဒဏ်ရာ ရ သွားကြတဲ့ သူ တွေ အတွက် လည်း စိတ် မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
အားလုံး ဘေးဒုက္ခ အပေါင်းမှ ကင်ငြိမ်း ကြပါစေ။
ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါး ချမ်းသာခြင်း သုခနဲ့ လည်း ပြည့် စုံကြပါစေ။
Good™ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ပါစေ။ တကယ်ကို တော်သေးတာပါ။ နောက်ကကားကလည်း အလယ်တည့်တည့်တိုက်တာမဟုတ်ဘဲ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် နေရာကတိုက်တော့ လွတ်သွားတာပါ။ ဒဏ်ရာရသွားတာက စုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်နဲ့လေ။ သူတို့အတွက်တော့ ငြိမ်းလည်း တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး။ အချိန်ကလည်း နောက်ကျနေပြီဆိုတော့လေ။ ဆေးခန်းအပြန်တောင် သူတို့ အိမ်အပြန်ကို အဆင်ပြေပါ့မလားတောင်မသိဘူး။
ကံကြီးတယ် လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ တခါတခါ ကိုယ့်အမှားမရှိပဲ သူတပါးရဲ့ မဆင်ခြင်မှုကြောင့် အသားလွတ် အသက်ဆုံးရတဲ့ ပြသာနာတွေ အများကြီး ပဲ။ တချို့ဆို ဒုက္ခိတ ဖြစ်ရတယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း အပြင်ထွက်ရင် ဘုရားစာရွတ်တာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။
မဆင်မခြင်လုပ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော၊ မဆိုင်တဲ့သူတွေပါ တကယ်ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ အဲလို မဆင်မခြင်လုပ်မိတာတွေကို တဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်နိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်။ ငြိမ်းတို့ကိုယ်တိုင်ကောပေါ့။ အပြင်ထွက်ရင် ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အခြားအတွေးတွေရှိနေတဲ့ အခါလည်း ရှိတယ်။ အခုတော့ အမြဲတမ်း ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားနေဖို့ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးနေပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်တွေကြောင့် ကျနော်မြို့မှာ မနေတာဗျ..
တောမှာတော့ ကားတိုက်မှု မရှိဘူးးးး
တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေ မှောက်ပီးပဲ လျှောဘရားသားဖြစ်ကြတာ….ဟီးးးးးးး
ဘုရားဂုဏ်၊ တရားဂုဏ်၊ သံဃာဂုဏ်တွေ မမေ့နဲ့ပေါ့…ပီးတော့ မေတ္တာလေးတွေလည်း များများပွားပေး..
ကိုထွန်းရေ…… ကားတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုင်ကယ်တွေလည်း အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်။ ကိုယ်တိုင်မောင်းတာဆိုလည်း သတိထားပြီး စည်းကမ်းရှိရှိမောင်းရင် ကောင်းတာပေါ့နော်။ သူများနောက်က လိုက်တာဆိုလည်း သတိထားတာအကောင်းဆုံးပေါ့။ ( ဆရာကြီး ၀င်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်…) ဘုရားဂုဏ်၊ တရားဂုဏ်၊ သံဃာဂုဏ်တွေကတော့ အချိန်တိုင်း သတိရနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါကြောင်း……………………………. အခုလို သတိပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ထိထိရောက်ရောက် နဲ့ နှံ့နှံ့စပ်စပ် အရေးမယူလို့ပါ..။
(စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ်မောင်းတွေကို တိုင်ရင်၊ပြဿနာဖြစ်ရင် အရေးယူပါတယ်..တဲ့)
တကယ်က မတိုင်ပဲနဲ့ တိုင်စရာမလိုအောင် ရှာပြီး အရေးယူရမှာ
ပြဿနာမဖြစ်ခင်ကတည်းက ပြဿနာဖြစ်နိုင်တာတွေကို အရေးယူရမှာ
အလေးအနက်ထားပြီး လက်တွေ့ကျကျ အရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဘတ်စ်ကားမောင်းသူတွေ အငှားယာဉ်မောင်းတွေထဲက အများစုက
တော်ရုံအရေးယူမှု့မျိုးနဲ့ မနာဘူး၊ မကြောက်ဘူး၊ အရေးမထားဘူး
ငှက်ပစ်တဲ့သေနတ်နဲ့ ကျွဲကိုပစ်လို့တော့ အယားတောင်မပြေဘူး…။
ကျွဲကို ကျွဲနဲ့ တန်တဲ့(သင့်တော်တဲ့)သေနတ်နဲ့ ပစ်နိုင်တဲ့နေ့မှာမှ
ဒီကွန်မင့်ကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ချင်းစာပြီးပေးတာမဟုတ်ပဲ
တကယ့်အပြင်က တကယ့်ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာစပယ်ယာတွေ၊ ကုန်ကားဒရိုင်ဘာစပါယ်ယာတွေနဲ့
“ယာဉ်မောင်းတွေ စည်းကမ်းမဲ့တာရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းက ထိထိရောက်ရောက် နဲ့ နှံ့နှံ့စပ်စပ် အရေးမယူလို့ပါ..။”
“ဘတ်စ်ကားမောင်းသူတွေ အငှားယာဉ်မောင်းတွေထဲက အများစုက တော်ရုံအရေးယူမှုမျိုးနဲ့ မနာဘူး၊ မကြောက်ဘူး၊ အရေးမထားဘူး” ဆိုတာ တကယ်ဟုတ်တယ် ဦးဦးပါလေရာရေ……..
လူပိုမတင်ရဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုပဲကြည့်ပါ။ သူတို့ပြောသံကြားတာကတော့ လူပိုတင်မိရင် ကားရော၊ လူရော နေပြည်တော်မှာ ဆယ်ရက်သွားနေရမယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီ့လိုသတ်မှတ်ထားတာကို မကြောက်တဲ့ကားတွေက လူတင်တယ်။ တကယ်လူတင်တော့လည်း ဖမ်းတယ်ဆိုတာကို မတွေ့ရဘူး။ အဲဒီ့တော့ အစက လူမတင်တဲ့ ကားတွေပါ လူပိုတွေတင်တော့ အရင်အတိုင်းပဲ ကားတွေက ကြပ်မြဲပဲပေါ့။
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ မျဉ်းကျားကနေ လမ်းမကူးတဲ့ကိစ္စဆိုလည်း အရေးယူတဲ့နေရာယူတယ်၊ အရေးမယူတဲ့နေရာလည်း အရေးမယူဘူးလေ။
ဒါ့ကြောင့် သူတို့တကယ် အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တောင် ခဏလေးနဲ့တော့မရပါဘူး။ တကယ့်ကို သေသေချာချာနဲ့ စနစ်ကျကျ၊ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်မှဖြစ်မှာပါ။
ဂျာနယ် ထဲပါလာ ပါပြီ … ဘယ်ဂျာနယ်ဆိုတာ မပြောပြ နိုင်လို့ sorry ပါဗျို့  .. မှတ်လာပြီးတော့မှ ခု ရေးမယ်လုပ်တုန်း မေ့ သွားလို့ … :-(
ပါရမီ အဓိပတိကားတွေက အဓိက စည်းကမ်းမဲ့နေတာ သူတို့အပေါ်က အုပ်ချုပ်သူတွေ အားကိုးနဲ့ မိုက်ပြနေတာပါ။ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်ထဲက `လူထုပခုံးပေါ်က နတ်ဆိုးများ´ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးအတိုင်းပါပဲ။
ဒီရက်ထဲ သတင်းစာမှာ ပါရမီ အဓိပတိယာဉ်များ စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းရင် ဆက်ဆံရေးမပြေပြစ်ရင် တိုင်ပါဆိုပြီး ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ ကြော်ငြာထည့်လာပါတယ်။ ဘယ်လို အရေးယူတယ်ဆိုတာလေးပါ ထည့်ဖော်ပြပေးသင့်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် အန်တီပဒုမ္မာရေ………. တိုင်ပါဆိုပြီး ဖုန်းနံပါတ်တွေတော့ ကြော်ငြာထားပါတယ်။ ဘယ်လိုအရေးယူတာလဲဆိုတာရယ်၊ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ၊ မယူဆိုတာကို မသိရဘူး။ ကိုယ်တိုင်တာကကော ထိရောက်ရဲ့လား။ မထိရောက်ဘူးလား မသိဖြစ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့လို စည်းကမ်းမဲ့တာတွေကို တိုင်တာတော့ တိုင်နေရမှာပဲ။
ကျွန်တော်ကောဘဲ၊ ခုမှ ရောက်ဖြစ်တာ၊ မ၀င်တာတော်တော်ကြာသွားတယ်ဗျာ
အန်ကယ်ကြီးပြောတဲ့ အဲ့ဒီ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက တာဝန်ကိုယ်စီကျေကြရင်တော့ ဒီလိုကိစ္စတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ သူတို့တွေလည်း သူတို့တာဝန်သူတို့ကျေ၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။
Nyein Nyein ဘာမှမဖြစ်လို့ တော်သေးတာပေါ့နော..
ယာဉ်စည်းကမ်း အကြောင်းကတော့ပြောမဆုံးနိုင်တဲ့ ဇတ်လမ်းတွေပေါ့
အဲထဲမှာ တစ်ခုခေတ်စားနေတာက မီးပွိုင့်မိလို့ တန်းစီရင် ကားတန်းကရှည်နေတတ်ပါတယ်
အဲဒါကို နောက်ကပုံမှန်အတိုင်းစီမစောင့်ပဲ တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောကကျော်ပြီး
မောင်းတက်သွားကြတာ နောက်တော့ဟိုးရှေ့မှာသွားပိတ်ပီး အချိန်တွေ မကြာသင့်
ငြိမ်းတို့နားမှာ လမ်းပြင်တုန်းကလည်း အဲဒီ့လိုပါပဲ။ ပုံမှန်တန်းစီပြီး သွားရင် အဆင်ပြေတာကို မစောင့်နိုင်ဘဲ ကျော်တက်ကြတော့ လမ်းတွေပိတ်ပြီး ကြာသင့်တာထက်ပိုကြာကုန်ရော။ နောက်ပြီး အဲဒီ့လို ကိုယ့်ယာဉ်ကြော ကိုယ်မမောင်းဘဲ တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောမှာ မောင်းလို့လူတွေကိုတိုက်မိတာလည်း ခဏခဏပါပဲ။ ဦးကြီးမိုက်ပြောသလိုပေါ့လေ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိသေးတာက အဓိကပေါ့။ “မူ” ကို “လူ” ကနိုင်နေတာက ဆိုးနေတာပါ။
တော်သေးတာပေါ့အေ… ညည်းနှယ့် နောက်ဆုံးမှာ ဘာလို.သွားထိုင်ရတာလဲ.. ညော်ဒကိန်းရေ ကံသီပေလို.ပဲ….. ဒါများ အေ သများဆီဖုန်းဆက်ပေါ့….သများက အဲဒီနားလေးမှာ နေတာ …… ရေလာတိုက်မှာပေါ့ အေ
ကိုတိုက်ရယ်…… ကိုတိုက်ဆီ ဖုန်းဆက်ဖို့နေနေသာသာ လူကလန့်ပြီး ကားပေါ်ကနေ လမ်းပေါ်ကို ဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းတောင်မသိဘူး။ ဒီကြားထဲ ဘေးနားက ဒဏ်ရာရတဲ့ လူဆီက သွေးတွေက ကိုယ့်အင်္ကျီပေါ်မှာ လာစွန်းနေတော့ ကိုယ်ပါဒဏ်ရာရတယ်ထင်နေတာ။ ပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စမ်းပြီး ဘယ်နားမှ မနာမှ ဒဏ်ရာမရဘူးဆိုပြီး ဟင်းချရတာ။
မမငြီမ်းရယ်ကံသီပေလို့သာပေါ့… လိုင်းကားသမားတွေတင်စည်းကမ်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျ.. taxi သမားတွေလဲစည်းကမ်းမရှိကြဘူး.. ကိုကို ဘဲဥတွေကလည်း ကားရှုပ်တဲ့နေရာ ကားကျပ်တဲ့နေရာမှာမရှိဘူး.. သူတို့ဘယ်မှာရှိလဲသိလား ကားရှင်းလူရှင်း ပိုက်ဆံတောင်းလို့ရတဲနေရာမှာပဲရှိတာ… ကျွန်တော်ဆိုခဏခဏတိုင်တယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်တိုင်စာ ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး.. တစ်ခါဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကိုတိုင်တာ…
ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိလည်း ဆက်သာတိုင်ပါ ကိုချစ်တတ်သူရေ……… လှုပ်ပါများရင် နဲ့တတ်တဲ့ သဘောရှိတော့ တိုင်တဲ့သူများရင်တော့ သူတို့လည်း နည်းနည်းလေးတော့ အရေးယူလာမယ်ထင်ရတာပဲ။
အဓိပတိတို့… ပါရမီတို့… မောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းဒရိုင်ဘာတွေနဲ့တွေ့တော့မှ ပြသနာအရင်းအမြစ်ကို စသိရတယ်….
အဲဒီ အဓိပတိတို့ ပါရမီတို့ ကားကြီးတွေကို စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက်က ပိုင်တာမဟုတ်ပဲ… စစ်တပ်မှအရာရှိများက ပိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်… ကျွန်တော့်အထင်ပြောရရင် ဦးပိုင်က ကားတစ်စီးကို နိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းလာ… တပ်မတော်ကဆိုင်ရာပိုင်ရာ အရာရှိများက ဦးပိုင်မှကားကိုစပေါ်ထိုက်သင့်သလောက်တင်ပြီးတော့ အပြင်ယဉ်မောင်းများကို ငှားစားပါတယ်…
အဲဒီလိုငှားစားတဲ့အတွက်… တစ်ရက်ကို ၅သောင်းနှင့်အထက်ဝင်ငွေရှိတယ်လို့ သိရပြီရော….
အဲဒီမှာ ဗိုလ်ကြီးတို့ ဗိုလ်လေးတို့ ဗိုလ်မှူးကြီးတုိ့… ပိုင်တဲ့ပါရမီကားများကို ယာဉ်ထိန်းရဲကလဲ မဖမ်းရဲ…. ဖမ်းလဲ…ခဏဆိုသလို…
အရေးမယူရဘဲ ပြန်လွှတ်ပေးနေရတာကြောင့် ပါရမီနဲ့ အဓိပတိကားများက ထင်တိုင်းကျဲနေကြောင်းသိရတယ်…
ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်က စည်းကမ်းမလိုက်နာရင် ယာဉ်ထိန်းရဲက လိုင်စင်သိမ်းပြီး ချလန်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်….
အဲဒီ ချလန်လေးများ လက်ထဲရောက်ရင် ဒရိုင်ဘာအဖို့ တရားဝင်စည်းကမ်းချိုးဖောက်ခွင့်ရတော့တာပါပဲ….
အမှန်က ချလန်နဲ့ကားဆက်လက်မောင်းခွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေကလဲ သေချာထိန်းသိမ်းသင့်ပါပြီ…
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဒရိုင်ဘာနဲ့ စပါယ်ယာပေါ့ဗျာ… သူတို့က တစ်ရက်ကို ဘယ်လောက်ဆိုပြီး အုံနာကြေးနဲ့ကားကို မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ထုတ်ပြီး မောင်းပါတယ်… ညနေကျရင် အုံနာကြေး ကားပိုင်ရှင်ဆီပေးပြီး ကျန်တာသူတို့လုပ်အားခပါဘဲ…
အဲဒီမှာ… ခရီးသည်ရရေး… ပြူးပြဲမောင်း… ခရီးသည်လုပြိုင်မောင်းကိစ္စတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်…
ဖြစ်သင့်တာတစ်ခုက စပါယ်ယာနဲ့ ဒရိုင်ဘာ လူဘယ်လောက်ရရ ပုံသေလစာပေးပြီး မောင်းစေချင်ပါတယ်… ဒါမှ ခရီးသည်လုတာ ပြိုင်မောင်းတာမရှိဘဲဖြစ်လာမှာပါ… ဒီလို City Bus ဆိုတာမျိုးက စီးပွားဖြစ်ပြိုင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်…
အလုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ခရီးသည်များပါတယ်… အလုပ်ပြန်ချိန်လဲ ထို့အတူပေါ့… ဒါပေမယ့် အလုပ်ပြန်ချိန်က အိမ်ကို ဘယ်အချိန်မှရောက်ရောက်ဖြစ်ပေမယ့်… အလုပ်သွားချိန်က အလုပ်ကိုအချိန်မီရောက်ရပါ့မယ်….
Bus အဆက်ပြတ်လို့ အလုပ်နောက်ကျတဲ့အချိန်ပေါင်းမနဲပါဘူး…
အဲဒါ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ပုံသေလစာမဟုတ်ဘဲ ပိုတာစားဆိုတဲ့စနစ်ကြောင့်ပါ…
ဥပမာ… ဂိတ်စကနေပြီး ၁၅မိနစ်စီခြားပြီး ကားထွက်လာမယ်…
ကားတိုင်းက ဘယ်လူတက်များသောဂိတ်ဖြစ်ဖြစ် တင်နိုင်သလောက်ပဲတင်ပြီး၊ ရပ်စောင့်နေတာမျိုးမလုပ်ဘဲ… ပုံမှန်အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်… ကျွန်တော်တို့ အခုလို လူကြပ်တာမျိုး နောက်ကားကို တစ်နာရီလောက်စောင့်ရတာမျိုးမဖြစ်ပါဘူး…
ကားမှတ်တိုင်တိုင်း တစ်စီးနဲ့တစ်စီး ၁၅ မိနစ်စီခြားရမယ်ဆိုရင်… ကျွန်တော်တို့ ၁၅ မိနစ်ထက်ပိုပြီး ကားမစောင့်ရတော့ပါဘူး…
အဲဒီလိုပဲ… ကားတစ်စီးကြားမှာပျက်ရင်တောင် နောက်ထက် မိနစ်(၃၀)ထက်ပိုမစောင့်ရပါဘူး… စနစ်ကျတော့ City Bus Routing System ရှိသင့်နေပါပြီ…
တခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲ… အလုပ်ဆင်းချိန်…. အလုပ်တက်ချိန်မှာ ကားတွေ… ရထားတွေကြပ်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ဖိသိပ်ထည့်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး… သက်ကောင်းကောင်းရှုလို့ရပါတယ်… အိနြေ္ဒမပျက်ပါဘူး…
ပုဆိုးကျွတ်မကျန်ပါဘူး… အကျီ င်္ကျယ်သီးပြုတ်မထွက်ပါဘူး….
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားကိုသွားရင်… ဘယ် MRT ကိုစီး… ဘယ် BUS ကိုစီးပြီး ဘယ်မှတ်တိုင်မှာဆင်းဆိုတာမျိုး လမ်းညွှန်းလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်…
မသွားတတ်ရင်တောင် အဲဒီလမ်းညွှန်လေးရရင် စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ ရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပါ…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်ကားနံပါတ်ကိုစီး ဘယ်မှတ်တိုင်မှာဆင်းဆိုပြီး ပြောလိုက်လို့ကတော့ ပြိုင်မောင်းတဲ့အချိန် မှတ်တိုင်စေ့ ကားမရပ်တာမျိုးဖြစ်ရင်… လိုရာမရောက်ပဲ… ဒုက္ခတောင်ရောက်နိုင်ပါသေးတယ်…
အဲဒါအပြင်ကို မသိလို့မေးရင်တောင် စပါယ်ယာများက မတူသလိုဆက်ဆံမှုပါ… ကျရာနေရာမှာ ပါဝါပြမှုလို့ ဆိုချင်ပါတယ်…
စည်းကမ်းဆိုတာ အတင်းအကြပ်လိုက်လုပ်ရတာထက် မိမိအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့စည်းကမ်းရှိတာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်…
ပါဝါပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ယာဉ်ထိန်းရဲကလဲ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ မိမိရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အပြည့်သုံးပါ…
မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အပြည့်သုံးပြီး… လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လျော့ပေးတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး….
နောက်တစ်ခုက ဗိုလ်ကြီး၊ ဗိုလ်လေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်… ကားအုံနာလုပ်ရင် ကားအုံနာအဖြစ်နဲ့အရေးယူခံရပါစေ…
There is no one above the law ဆိုတာကို တကယ်အကောင်အထည်ဖော်သင့်နေပါပြီ…
လူတိုင်းလူတိုင်း အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားစေလိုပါတယ်…
ကိုဝတုတ်ပြောမှပဲ အကြောင်းစုံကိုသေချာသိရပါတော့တယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ကောလဟာလအနေနဲ့တော့ ကြားဖူးပါတယ်။ ကားတွေက လူရအောင် မှတ်တိုင်တစ်ခု၊ တစ်ခုမှာ အကြာကြီး ရပ်တယ်။ ပြီးတော့ ကြပ်ပိတ်သိပ်နေအောင် လူတင်တယ်။ ပြီးတော့ အသားကုန်မောင်းတယ်။ ဒါတွေဟာ စည်းကမ်းမရှိ၊ စနစ်မကျမှုတွေကြောင့်ပါ။ ကိုဝတုတ်ပြောသလို
City Bus Routing System ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ မအိရေ……ကံကောင်းလို့ ပြန်တွေ့ရတာပါ။ ငြိမ်းလည်း ရွာထဲမရောက်တာတော်တော်ကြာပါပြီ။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ တတ်နိုင်သမျှ ရွာနဲ့ အဆက်မပြတ်အောင် နေမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
ငြိမ်းငြိမ်းရေ ကံသီလို့ပဲနော် ညီမပြောသလိုပဲ ကိုယ်တွေ့ကြုံသူတွေနည်းနိုင်သမျှနည်းပါစေလို့ပဲ..။